.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Flash ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခု
Flash Song ဝါသနာရှင်များအတွက် Flash ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခု
ကျွန်တော် ဒီဆိုဒ်လေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ ရက်လောက်ကမှ တွေ့ခဲ့တာပါ။ Flash နဲ့ ပက်သက်ပြီး အတော်လေးကို
စုံလင်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှာနိုင်ရင်၊ ရှာတတ်ရင် ၊ ရှာတတ်သလို ကိုယ်လိုချင်တာကို ရပါလိမ့်မယ်။
ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက်မှာ Menu Tab တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေ အဆင့်ဆင့် အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အချိန်ပေးပြီး
ရှာမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မသုံးဖူးသေးတဲ့ Flash Effect သစ်တွေ သင့်လက်ထဲကို တစ်ပုံကြီး ရောက်လာမှာပါ....
ဒေါင်းရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်လင့်ကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်နော်..သွားရှာပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါဦး..
Go to >> http://www.flashkit.com/
ကိုယ်လိုချင်တာတွေ ရှာဖို့အတွက် ဆိုဒ်ရဲ့ အပေါ်ညာဘက်မှာ Menu Tab တွေ ရှိပါတယ်..။
အောက်မှာတော့ ကျွန်တော် ရှာထားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြပေးထားပါတယ်..
အောက်မှာ နမူနာ နည်းနည်းတော့ ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီထက်ကောင်းတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်နော်..
ဒီပို့စ် [ သို့ ] http://www.flashkit.com/ ကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ကို
Credit ပြန်ပေးပါ။ ဒီလို ဆိုဒ်တစ်ခု တွေ့ဖို့ ဘယ်လောက် အချိန်ပေးပြီး ရှာထားရတယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်ပါတယ်။
Flash Song များ ဖန်တီးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
Labels: Effect, Flash, Website, အသိပေးခြင်း